ကွန်ပျူတာကနေတစ်ဆင့် INSTAGRAM အတွက်ပြာကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို - INSTAGRAM ကို - 2019
သင့်ရဲ့ PC မှာ Instagram ကိုအတွက်ပြာကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျဗီဒီယိုဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ, တယောက်ကိုတယောက် format ကို convert အထူးအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ မဆို Video Converter အခမဲ့ - ဤဆောင်းပါးတွင်ပိုမိုအသေးစိတ်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်သည့်အကောင်းဆုံး converters အဖြစ်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
မဆို Video Converter အခမဲ့ထုတ်ကုန်၏ကြီးမားသောစာရင်းကိုဗီဒီယိုပြောင်းလဲကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်ဖြစ်သောအခမဲ့ converter ကို function ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဗီဒီယို converting အခြားဖြေရှင်းနည်းများကိုတွေ့မြင်အကြံပြု
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လိုဗီဒီယိုဖိုင်များကိုမဆို Video Converter အခမဲ့သို့ကူးပြောင်းရန်
အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာတစျခု, ထိုသို့အလေးပေးဒီမှာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Tablets, စမတ်ဖုန်း, iPod, game consoles စ, etc: အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတကယ်အထင်ကြီးပုံစံမသာစာရင်း, ဒါပေမယ့်လည်းလိုက်လျောညီထွေဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်သည့်အဘို့ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတင်ပြထားပါသည်
DVD ကို Burn
နောက်ထပ်သိသာအင်္ဂါရပ် - DVD-disk ကိုအသံဖမ်း။ ပရိုဂရမ်တွင် disc ကိုတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့ရုပ်ရှင် add, ဒါပေမယ့်လည်း (themes များနှင့်ဂီတပူးတှဲတစ်ဦးရှေးခယျြမှုနှင့်အတူ) ကို DVD ကို menu ကို customize နှင့်အသေးစိတ်အတွက်အသံနှင့်ဗီဒီယိုကိုထိန်းညှိဖို့သာအခွင့်အလမ်း။
ပြန်ဖွင့်စဉ်အတွင်းဗီဒီယိုအသုံးပြုသူကွန်ပျူတာဗီဒီယိုကနေဘောင်ကယ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမဆို Video Converter အခမဲ့ဒီတာဝန်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
အများအပြားအလားတူအစီအစဉ်များကဲ့သို့ပင်ဥပမာ, မဆို Video Converter အခမဲ့အတွက် Xilisoft Video Converter, ချုံ့ခြင်းကလစ်များလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် application ကိုသင်ဖြတ်ဖို့မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းအပိုကဗီဒီယိုအပိုင်းအစများထွက်ဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒီ function အသုံးပြုသူလှီးဖြတ်ခံရဖို့လုံးဝအခမဲ့ဧရိယာကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်, မလိုချင်တဲ့ဒေသများဖြတ်တောက်, ဗီဒီယို၏ Display ကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။
ထို program ၏သီးခြားအပိုင်းမှာတော့အရောင်ဆုံးမခြင်း setting များကိုအဖြစ်သင့်ဗီဒီယို၏အမြင်အာရုံအစိတ်အပိုင်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟု filter များနှင့်သက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးထားရှိခဲ့ကြသည်။
ဗီဒီယိုယုံကြည်စိတ်ချရသောသင်၏အမူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ, သင်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးများနှင့်ရေစာတစ်ခုလျှောက်ထား၏ function ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်လျှင်။ ရေစာတစ်ခုအဖြစ်လျှောက်လွှာအတွက် loaded လွင်ပြင်စာသား, နှင့်ရုပ်ပုံ-လိုဂိုအဖြစ်ပြုမူနိုင်သကဲ့သို့။
ဗီဒီယိုဖိုင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုချုံ့ file တစ်ခုအခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ ဒီနေရာတွင်အရွယ်အစားနှင့်ဗီဒီယိုအရည်အသွေး, ဤအ parameters တွေကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နည်းနည်းပြောင်းလဲပစ်ရန်သတိပေးခံရလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဲဒါကိုသေးငယ်တဲ့ကရိန်းနဲ့စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုအားပေးခံရဖို့ပါလျှင်သို့သော်, ထို့နောက်သင်ခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိမည်မဟုတ်ပေမယ့်ဖိုင်အရွယ်အစားသိသိသာသာလျော့နည်းလိမ့်မည်, ဗီဒီယို၏အရည်အသွေးထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်၏စွမ်းရည်များအသုံးပြုခြင်း, သငျသညျကိုသာအသံအရည်အသွေးကိုပြောင်းလဲပေမယ့်အော်ဒီယိုသီချင်း disable သို့မဟုတ်အစားမထိုးနိုင်ပါ။
တစ်ဦးကို CD ကနေဂီတပြောင်း
သင်ဂီတကူးယူခြင်းနှင့်လိုအပ်သောပုံစံသို့ပြောင်းလဲချင်ရာမှ CD-ROM ကိုများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြပွဲ၌ဤအမှု၌, အစီရင်ခံ tool ကိုရှိပါက။
1. ရုရှားဘာသာစကားများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးခေတ်မီ interface ကို,
2. ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှအများဆုံးခေတ်သစ် devices တွေကိုဗီဒီယို converting ပံ့ပိုးမှု;
မဆို Video Converter အခမဲ့၏အားနည်းချက်:
မဆို Video Converter အခမဲ့ - ဤဗီဒီယိုနှင့်ဂီတပြောင်းလဲဘို့အလွန်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်စဉ်းစားဟန်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုဗီဒီယိုဖိုင်များ, DVD ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ကလစ်ပ်ပြောင်းတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
မဆို Video Converter အခမဲ့အခမဲ့ Download
ဟမ်းစတားအခမဲ့ Video Converter က MP3 Converter မှအခမဲ့ Video iWisoft အခမဲ့ Video Converter Freemake Video Converter
မဆို Video Converter အခမဲ့ - လူကြိုက်များတဲ့ကို formats ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်အခမဲ့ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူပါတယ်-to-အသုံးပြုမှုကိုလျှောက်လွှာ။
Size: 49 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: လကရ phone က upgrade လပသငၿပလ? လကရ phone က upgrade လပသငပလ? (အောက်တိုဘာလ 2019).